Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län / Essunga
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 23 10 2019
Degmada waxeey lee dahay in yar oo dhaafsan 5 670 dad. 2 000 waxeey degan yihiin Nossebro, oo ah xaafada degmada ugu weeyn.
235 kiilomitir oo laba jibaaran
Vara 23 kiilomitir
Trollhättan 41 kiilomitir
Lidköping 54 kiilomitir
Degmada waxeey uu shaqeeysaa si soo galooytiga uu helaan fursad ee ku kulmaan iyo isku bartaan ayadoo la qabanaayo howlo kala duwan. Degamada muhiim ee tahay in aada cidlo ku dareemin. Halkaan waxaad kula kulmi kartaa dad ku hadlo afka iraan, af daari, af carabi, af ruush afka thayland iyo kuwo kale. Nala soo xarir si aad hesho warbixin, haddii aad rabto in aad afkaada ku hadasho, haddii aad rabto in aad soo guurto halkaan ama na soo booqato.
Bartamaha degmada ee Nossebro waxaa ku yaalo guriyaal la kireeysto. Iskuulada iyo dukaamada masaafad socod lagu tago ee jiraan. Guriyaal la kireeysto waxaa laga heli karaa Essunga Bostäder AB.
Essunga Bostäder AB.
Degmadeena waxaa degan dad badan oo ka yimid dalal kale. Halkaan waxaa joogo dad ku hadlo afka hooland, af ingriis , af carabi, af daari, afka iraan, afka thayland, af ruush, afka sheesheeniya, afka booland iyo kuwa kale oo badan.
Degmadeena waxeey lee dahay ururo kala duwan oo badan.
Dukaamamo ku yaalo Nossebro – Dukaamo cunto (Hemköpi, ICA, Ericssons chark), foorno iyo kafeteeriyo, maqaayado, dukaamo-dhar, dukaan-kabo, dukaan qamar iyo nacnac, dukaan yar, dukaamo gacan labaad ee dhar iyo alaab guri, dukaan elegtroni, dukaanka adeega telefishinka, maxadad shidaal oo leh adeeg baabur, dukaan ubax, dukaanka maadooyinka kiimikada, dukaanka dharka caruurta, baalbiyeeri, banki, Systembolag, Nossebro energi (shirkada-korantada) iyo farmashiye.
Xafiiska shaqada iyo xafiiska qasnada ceeymiska matalahooda waxeey imaadaan Nossebro, markii la balansado si ee uula kulmaan soo galooytiga cusub oo ka qeeyb qaadanaayo barnaamijka taabo galinta ee xafiiska shaqada.
Iskuulka 1-9 waxaa ku dhagan maktabad dadka dhan loogu tala galay. Halkaan waxaa ka jirto fursad lagu amaahdo bugaag ku woran luuqado kala duwan.
Halkaan waxaa ku yaalo dugsi xanaano iyo dugsi xanaano ee maalmeed oo loogu tala galay caruurta 1-5 jir ah iyo guriga xiliga firaaqada loogu tala galay caruurta uu baahan kormeer iskuulka ka hor iyo kadib markii ee hooyadu iyo aabaha ee mashquulsan yihiin. Halkaana waxaa ka jiro goob xili firaaqeed oo loogu tala galay caruurta xooga weeyn oo habeenkii furan.
Nossebro waxuu lee yaay iskuul loogu tala galay fasalka 1 ilaa 9. Degmada waxeey heshay toojignaan badan iskuulada horumar gaaray. Ardayda dugsiyada sare waxeey tagaan Trollhätaan, Vara ama Vårgårda.
Dugsiyada hoose-dhexe Dugsiyada sare
Dadka waa weeyn waxeey dhigan karaan barashada iswiidhiska soo galooytiga, waxbarashada dadka weeyn ee heerka hoose ama sare gudaha Nossebro. Halkaan waxaa laga isticmaali karaa kombiyutaro gacanta lagu qaadi karo iyo qalab-caawinaad oo kala duwan markii lagu jiro xiisada. Halkaan waxaa ku yaalo qol-kombiyuutareed oo laga dhigan karo koorsooyin kombiyuutaro oo kala duwan. Koorsooyin qaarkood waxaa la dhigan karaa ayadoo laga akhrisanaayo masaafad, kombiyuutarka laga dhiganaayo.
Nossebro waxaa ku taalo rug caafimaad, farmashiye, rugta caafimaadka hooyoyinka iyo daryeelka ilkaha oo joogaa dhakhtar, kalkaaliso bukaan, umuliso iyo in kale. Rugta caafimaadka waxaa ku ag dhagan degaanka-waayeelada.
Xarunta-bilaabadka waxaa ka shaqeeyo xoghaye-qaxooti oo qaxootiga ku cusub meesha ka caawinaayo jiheeyn gudaha degmadooda cusub. Halkaan waxaa la imaan karaa si loo elo tageero iyo talo markii loo baahdo. Markii aad ku cusub tahay anaga ayaa ku caawineeyno. Lambarka telefoonka waa 0512- 571 66.
Nossbro waxeey ku 2 maayl uu jirtaa Vara, 4 maaylna Trollhättan, 8 maaylna uu jirtaa Göteborg. Bas ayaa halkaas ku tagi kartaa. Waqtigyada baska baxo waxeey ku jiraan bogga Västtrafik.
Degmada waxaa ku yaalo shirkado badan. Shaqo dhiibaha weeyn waxaa ka mid ah Dahrentråd ee gudaha Jonslund, Componenta gudaha Främmestad iyo Ginza ee gudaha Fåglum.
Ka akhriso in kale oo ku saabsan nolosha ganacsiga ee degmada.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Essunga